မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: မုံရွာ - မန္တလေး လမ်းက သစ်ပင် ကြီး
“၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
မုံရွာ - မန္တလေး လမ်းက သစ်ပင် ကြီး
မုံရွာ - မန္တလေး လမ်းက သစ်ပင်ကြီး တစ်ခုပေါ် နေသည့် " စု " ဆိုသည့် စကားလုံး Photo - Myomin Oo
ကိုယ့်နိုင်ငံကို ချစ်ပါ။ ဗမာတွေဟာ လူဖျင်းတွေ၊ လူကြောက်တွေ၊ လူပိုတွေ၊ လူရိုင်းတွေ လူဂွစာတွေ၊ လူမတရားတွေလို့ကမ္ဘာက အထင်ခံရအောင် မလုပ်ပါနှင့်။ဗမာတွေဟာ ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အလုပ်လုပ်ပြီး ဂုဏ်ယူကြပါ။(ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း)
Now is Right time for BURMA."Just do it!!အာဏာရှင်တွေ ဂျွမ်းထိုးကုန်ပြီ၊ဗမာပြည် ဘယ်လဲ ဘာလဲ?။
“ လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရေး မရှိရင် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိနိုင်ဘူး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိရင် နိုင်ငံသားတွေဘ၀ ဘယ်လုံခြုံမလဲ၊ ဒီမိုကရေစီကိုသွားဖို့ စစ်မှန်တဲ့ တိုးတက်မှုလည်း မရှိနိုင်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်မယ်လို့ ပြောနေတဲ့ အစိုးရဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ် အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ရှိစရာလိုတော့မှာလဲ ”ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (အမေရိကန် အောက်လွတ်တော်မိန့်ခွန်း)
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ထောင်နိူင်အောင် ကြိုးစား ခဲ့သူ များကို ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကျင့်သုံးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ လူအများ က အကျဉ်းချ ထားတာကို မှန်ကန် ပါတယ်လို့ ဘယ်လို အသိဥာဏ်မျိုးနဲ့များ လက်ခံပေးကြတာပါ လည်း ။ အတ္တမကင်းကြတဲ့ လူသားတွေမှန်ပေမယ့် လူနည်း စုကြောင့် လူအများ ဒုက္ခ ကြီးစွာခံစားနေရတာကို တရားပါတယ်လို့ အခွင့်အရေးရလိုဇော နဲ့ တော့ မထောက်ခံပေးကြပါနဲ့ လို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် ဗျာ ။ဗမာ့သွေး ၁၆။၀၅။၁၁
နှစ်အလိုက် ကြည့်ရန် counter
1. Arzarnimg@gmail.com2. Ahbayah@gmail.com3. Downtamun@gmail.com4. Freeburma.freeburma@gmail.com5. Minmawsoe1975@gmail.com6. Nayminthuria@gmail.com7. nyiarzarni@gmail.com8. Nyonya.nay@gmail.com9. Ronal50@gmail.com10. Thadarmay@gmail.com11. Truemmnews@gmail.com12. Tw23tinwin@gmail.com13. Wunnahtun1944@gmail.com14. phyowai1984@gmail.com
ပြည်တွင်းမှ အင်တာနက်စတင်သုံးစွဲသူများ၊ အသုံးပြုနေ သော်လည်း အမှားအယွင်းပြနေသူများအတွက် ဤဇော်ဂျီ ဓါတ်ပုံကိုနှိပ်၍ အများသုံး ဗမာဖောင့် ကိုရယူပါ။ Click here, you may get fonts to read the square fonts.
Zawgyi-One latest version1.0.0.1.1
Keyboard layout ကဒီမှာ
**window7တွင် ဇော်ဂျီဖောင့်ရိုက်မရပါက ဒီ ဖိုင်ကို ယူပါ.
အစစ အဆင်ပြေမှာပါ. မရက Cbox မှာ ရေးထားခဲ့ပါခင်ဗျား။
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ဝန်ထမ်းများရဲ...
ကဒေါင်းညင်သာဒေါင်းအိုးဝေကိုဇာကနာကိုညောင်ရမ်းဂွတိုကိုထိုက်ကိုပုထုဇဉ်ကိုဖိုးဇေကိုသန့် ဇင်အောင်ကိုလူသစ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းလျှောက်ခြင်းဆုံစည်းရာဆောင်းယွန်းလဆိုးဝှတ်ဒီရေနေခြည်ဦးနှင်းခါးမိုးပန်းဗေဒါဖို့ ဝိန်းမှသူရဲကောင်းများ..မဖြူဖြူသင်းမသဒ္ဓါမာယာမဂ္ဂဇင်းမျိုးဆက်အမှတ် (၅)မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးလေဆန်ပျံမဲ့မျိုးဆက်သစ်၏ ငြိမ်းချမ်းဌက်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မိုင် ၃၀၀၀ ခရီးသည်ပြည်သူ့အသံလင်းလက်ကြယ်စင်လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲသမိုင်းထဲကရက်စွဲများသီရိလင်္ကာရောက်သံဃာတော်များ(မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး)အဖွဲ့ဒေါင်းတမာန်phyowai-mmpဒီမိုဝေယံအမိမြန်မာပြည်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာများမျိုးဆက်များ ၉၆မျိုးချစ်မြန်မာအရှင်မေတ္တာစာရအသားထဲမှ..လောက်ကောင်များအိမ်မက်အိမ်ကလေး
ဒေါင်းအိုးဝေကိုဇာကနာကိုညောင်ရမ်းဂွတိုကိုပုထုဇဉ်ကိုသန့် ဇင်အောင်ကိုလူသစ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းလျှောက်ခြင်းဆုံစည်းရာဆောင်းယွန်းလဆိုးဝှတ်ဒီရေနေခြည်ဦးနှင်းခါးမိုးပန်းဗေဒါဖို့ ဝိန်းမှသူရဲကောင်းများ..မဖြူဖြူသင်းမသဒ္ဓါမာယာမဂ္ဂဇင်းမျိုးဆက်အမှတ် (၅)မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးလေဆန်ပျံမဲ့မျိုးဆက်သစ်၏ ငြိမ်းချမ်းဌက်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မိုင် ၃၀၀၀ ခရီးသည်ပြည်သူ့အသံလင်းလက်ကြယ်စင်လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲသမိုင်းထဲကရက်စွဲများသီရိလင်္ကာရောက်သံဃာတော်များ(မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး)အဖွဲ့ဒေါင်းတမာန်phyowai-mmpဒီမိုဝေယံအမိမြန်မာပြည်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာများမျိုးဆက်များ ၉၆မျိုးချစ်မြန်မာအရှင်မေတ္တာစာရအသားထဲမှ..လောက်ကောင်များအိမ်မက်အိမ်ကလေး